Izingobo zomlando ze-MAG - Thumela RELAY
Ukuthula yimpendulo ehlakaniphile kunazo zonke ongayinika iziwula - ISANTE PLUS MAG
Ngokubheka ukusebenzisana esikubeka engcupheni yokuba nabantu abaningi, ukubonisa ukuhlakanipha kuyadingeka futhi kubalulekile ukuze sigweme noma yikuphi ukuphazamiseka kokuthula kwethu kwangaphakathi okuvela ekushintshanisweni okukhulu kakhulu.
Yebo, kunezinhlobo ezi-4 zobumbulo endaweni yonke - ISANTE PLUS MAG
La célèbre chanson de Pierre Perret louait déjà la diversité en matière de sexe masculin. « Le vrai, le faux, le laid, le beau… » Autant d’adjectifs pour créer une ode fédératrice au pénis, qui revêt plusieurs formes et caractéristiques.…
Umyalezo omuhle kaJim Carrey kunoma ngubani onesifo sokudangala - ISANTE PLUS MAG
Kunezinsuku lapho sizizwa sidabukile, sikhungathekile futhi sidumazekile ngempilo, lapho sizizwa singeneme. Kepha ukudana kuqala lapho siqinisekile ukuthi akukho okungasikhipha kulolu hlangothi nokuthi…
Lokhu kugeza okulula kwezinyawo zikalamula kuzosusa ubuthi emzimbeni wakho - ISANTE PLUS MAG
Uma uchitha usuku ligijima yonke indawo ukuze ufeze imisebenzi eyinkulungwane neyodwa, ngokuqinisekile kufanele uzithole ukhathele lapho usendleleni eya ekhaya. Ikakhulu kusukela ukukhathala kunomthelela omkhulu empilweni yakho naku ...
Owesifazane othandanayo noma ongusomabhizinisi? Isandla sakho siveza ubuntu bakho bangempela…
Ukufunda izintende zezandla zakho akuyona isayensi eqondile, kepha kuvela ukuthi imigqa eyivelayo iveza ingxenye enkulu yobuntu bakho. Umugqa ngamunye wabo uhambisana nesici esithile sezakhi ...
ICoronavirus ithinte iFrance nezingozi ezihlukumezayo emhlabeni: yini ...
Njengoba kucishe kube nabantu abayi-1300 41 abangenwe yi-coronavirus, isibalo sabashonile manje sisekushoneni kwabantu abangama-XNUMX eChina. Ebhekene nalolu bhubhane oluholele ekuvaleni kwezigidi zabantu eMbusweni Ophakathi, ukukhathazeka kuyakhula…
Sithandana nabantu abasenza sikhule ngokomoya - ISANTE PLUS MAG
"Uthando luyizwi lokukhala kokusa, uthando luyiculo lobusuku," kubhala uVictor Hugo. Ezizukulwaneni eziningana, uthando selugqugquzele ababhali abaningi, izazi zefilosofi, abadwebi nabaculi. Okuhambisana nentshiseko evuthayo kanye…
Izingane zikhula zijabule nobabamkhulu eceleni kwabo - ISANTE PLUS MAG
Umndeni ungenye yezinsika zenjabulo. Isikhungo seqiniso sokufunda nentuthuko, labo abasibona sizalwa bayasikhulisa futhi badlulisele indlela yabo yokuphila ngathi. Ogogo nomkhulu nabo bangabasebenza ...
Igciwane elibulalayo lingaqhamuka kusobho le-bat lisadliwa eChina…
Yize ingaqondwa kahle, i-coronavirus iyaqhubeka nokubala inani lokufa kwabantu abahlukumezekile. Imvelaphi yaseChina, yabangela ukungcoliswa kwabantu abangama-2700 kanye nokufa kwezakhamuzi ezingama-80 ngokusho kwephephandaba iLe Monde. EFrance, abantu abathathu kuthiwa ban…
Yebo, i-trauma isalokhu igcinwe emzimbeni (nansi indlela yokuyikhipha) - UKUZIPHATHA KWEMPILO…
Uma sivame ukukholelwa ukuthi izehlakalo ezibuhlungu zangesikhathi esedlule zinomthelela esimweni sethu sengqondo, kwehluke kakhulu. Futhi ngesizathu esihle, ukucwaswa kuyinto yeqiniso yesayensi efakazelwe kanye nomthelela wokuxineka empilweni yethu…
1 2 3 ... 33 olandelayo
I-RTL Morning ye-20 ngo-December 2019 - VIDEO
EFrance: Ingane itholwe ishonile endizeni evela e-Abidjan…
ENdiya: Ithimba leBJP lihlangana noNdunankulu uModi kanye…
Umthethosivivinywa omusha ungaphoqa abazali ukuthi bagome…
Isivumelwano sase-Ivory Coast nesaseJapan sisayina ukukhuthaza kanye…
U-OM OM - IG: IGoulam eMarseille, konke kuvuselelwa!…
New Year Eve: INdlovukazi igubha kanjani…
Lezi zitshalo ezi-4 egumbini lakho lokulala zilapha ukuqwasha futhi…